DABAGALKA 2019: Raadinta Kursiga Xildhibaanimada Puntland oo aad loogu mashquulsan yahay & Musharaxiin lacago badan ku bixinaya? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL DABAGALKA 2019: Raadinta Kursiga Xildhibaanimada Puntland oo aad loogu mashquulsan yahay & Musharaxiin lacago badan ku bixinaya? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha DABAGALKA 2019: Raadinta Kursiga Xildhibaanimada Puntland oo aad loogu mashquulsan yahay & Musharaxiin lacago badan ku bixinaya?
DABAGALKA 2019: Raadinta Kursiga Xildhibaanimada Puntland oo aad loogu mashquulsan yahay & Musharaxiin lacago badan ku bixinaya?
Feb 23rd, 2018 · 6 Comments
GAROOWE(P-TIMES)- Maalmihii ugu dambeeyey guryaha Isimada, Nabadoonada dhaqanka iyo Qabaa’ilada ayaa aad ugu mashquulsan doorashada 2019-ka ka dhici doonta Puntland iyo sidda loo kala qaadanaya Kuraasta golaha wakiilada oo ah kuwa dooran doona Madaxda cusub, haddii Eebe Idmo.
Si weyn ayaa looga dareemayaa gobalada iyo deegaanada oo dhan, waxaana Odayaasha beelaha ay wajiyadooda is arkayaan Siyaasiin ay ugu dambeysay xili hore, oo ay ku jiraan Xildhibaanadii kuraastan soo fadhiyey 4-tii sanno ee lasoo dhaafay, waqtiguna hadda uga e’eg yahay bisha 10aad ee sannadkan.
Loolanka ayaa sii xoogaysanaya maalin kasta, waxaana Suuqyada iyo goobaha fadhi ku dirirka aad looga hadal-hayaa doonista xildhibaanimo iyo xaaladdaha waa weyn ee waqtigan ku wareegsan.
Raadinta waqti xaadirkan ee Xildhibaanimada waxaa door wanaagsan ka ciyaaraya musharaxiinta Madaxweyne-nimada Puntland, oo qaarkood goor horeba bilaabay in ay bixiyaan lacago fara badan oo ay ku taageerayaan shaqsiga ay u rabaan kursiga Xildhibaanka.
Musharaxiinta qaarkood ayaa rumeysan in musharaxooda Xildhibaano oo soo baxaa ay ka dhigan tahay guul hordhac ah oo laga gaaray loolanka doorashada 2019-ka, waxaana socda baratankii ugu adkaa oo arrintan ka bilaaban doona.
Ma qarsoona in si weyn loo kala yaqaano taageerayaasha Musharaxiinta Madaxweyne-nimada ay kala wataan ee Xildhibaanada beelaha, qaar kamid ah ayaa gaarsiiyey faragalinta ilaa heerarka ugu hooseeya oo ay xooga saarayaan in ay soo baxaan saaxiibadooda ay isku aragtida yihiin.
Lama kala cadeyn doona cidda ku kala guuleysta Kuraasta beelaha ilaa laga gaarayo bilowga bisha September 2018, xiligaas oo ay cadahay cidda ah Mudane baarlamaan iyo in kale, bacdamaa saxiixyada Isimada la keeno bisha November 2018, taasna ay ka dhigan tahay in uu horey Shaqsigan u sii haysto Saxiixa Odayaashiisa.
Tartanka doorashada ee nagu soo aadan ee Puntland ayaa ka xiiso iyo xamaasad badan doorashadii uu ku guuleystay Madaxweyne Cabdiweli Max’ed Cali Gaas oo hadda xukunka uga dhiman tahay 10 bilood oo qura, taas oo ka dhigan in uu soo dhameystay in ka badan 4 sanno.
Ilaa hadda musharaxiinta la rumeysan yahay in ay tartankan galayaan ayaa ah kuwa aad u fara badan, inkastoo wararku sheegayaan in ay ka yaraan karaan, tiraddii sannadkii hore, maadaama doorashadan ay ka xamaasad badan tahay, haddana adeegsiga Lacaguhu uu gaaray heerkii ugu sareeyey.
DABAGALKA WARARKA ee Puntlandtimes ayaa ogaaday jiritaanka musharaxiin qaarkood xooga saaraya sidii Isbedelka u noqon lahaa mid ay ku mideysan yihiin, laakiin ma jiro ilaa hadda is arag dhameystiran oo musharaxiinta dhexmaray, inkastoo ay suuragal tahay in bisha April ay kulan kuyeeshaan mid kamid ah wadamada jaarka la ah Soomaaliya.
PUNTLANDTIMES waxay todobaadkii hore baahisay macluumaad ku saabsan Siyaasiinta ilaa hadda la rumeysan yaahy in ay yihiin musharaxiin iyo heerarka masuuliyadda ay soo qabteen RIIX HALKAAN
Warsidaha Puntlandtimes wuxuu si taxane idin kugu soo gudbinayaa warar ku saabsan doorashooyinka Puntland, Faalooyin ku saabsan musharaxiinta ilaa hadda is sharaxay, Caqabadaha 20 sanno ka dib aan waxba laga qaban ee ka jira gudaha Puntland, Loolanka helitaanka xubin baarlamaan, Aragtida Dadweynaha iyo Musharaxiinta hanka siyaasadeed leh.
AKHRISTE: Haddii aad daneynayso Arrimahaas fikradaada nagula wadaag Emailkan farahabdulkadir710@gmail.com
February 23, 2018 at 3:27 pm / Reply
Waa wax laga xumaado in puntland oo soo jirtay 1998-2018 ay weli ku jirto xulashada parlamaan ee ku salaysan habkan raagadiyey sidii loo heli lahaa xildhibaan dhab ah oo ku yimaada rabitaanka ama matalaada saxda ah ee xildhibaan leeyahay.
February 23, 2018 at 4:19 pm / Reply
Reer mudug baa diiday nidaamkii xisbiyada badan.
February 23, 2018 at 4:21 pm / Reply
Waxba soo kordhin mayso cid kasta oo soo baxda hadii nidaamkii hore ee madaxweynuhu wax kasta awooda siinayay sii socda.
Waa in sharci iyo nidaam shaqeeyaa.
February 23, 2018 at 4:24 pm / Reply
Afartayada sano maa naloo daayo baa iman
February 24, 2018 at 3:29 am / Reply
Baarlamaanka puntland waxaa soo doorta odayaal laaluush qaata mana jirto cid ay wax u qabtaan marka hadii sidaas ku yimaadaan maxaa laga sugi karaa
Waa in shcabku ka kacaan hurdada bass
Waa in nabadoonku uukeenaa qof u qalma bxubin baarlamaan ama ladilaa waa hadii ladoonayo in lahelo dad quality leh
February 24, 2018 at 8:47 am / Reply
Ina waxaan oran lahaa Gole sare dalka ha sii xukumo inta laga dhisayo xisbiyo aan qabiil ku dhisnayn
DEG DEG:Madaxtooyada Somalia oo ku dhaqaaqday arin dhabar ku noqotay Mucaaradka Farmaajo & Xildhibaano badan oo dalka laga masaafuriyey kadib markii…. posted on December 11, 2018
Gaas oo amar ku bixiyey in la xidho cid walba oo taageerta Farmaajo & Banaan bax ka dhacay Garowe posted on December 11, 2018
Ciidamo ka tirsan Puntland oo hada lagu dilay badhtamaha Bosaso & Xaalada magaalada oo…. posted on December 11, 2018
DEG DEG:Madaxweynaha oo amar culus lagu soo rogay & Safaradiisii dibeda oo la mamnuucay kadib markii…. posted on December 11, 2018
WAR DEG DEG AH:Xiisadii u dhaxaysay Farmaajo & Xildhibaanada Baarlamaanka oo gudoomiyaha aqalka sare kusoo biiray posted on December 11, 2018
Abshir Cusmaan on DHAGAYSO:Wararkii ugu dambeeyey ee Mooshinka & Madaxweynayaal u gurmaday Farmaajo
SADE MAREXAAN on Odayaasha Beesha Hawiye oo ku dhawaaqay war dhul gariir ku riday mucaaradka Farmaajo
© 0111 PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL. All rights reserved.